Dacwadda badda ee Kenya & Soomaaliya oo maanta la dhagaysanayo - BBC News Somali
Dacwadda badda ee Kenya & Soomaaliya oo maanta la dhagaysanayo
Maxkamadda cadaaladda ee dunida oo ah hay'adda xagga dacwadaha u qaabilsan QM ayaa lagu wadaa inay maanta billowdo dhagaysi furan oo ay ku dhagaysanayso kiiska xadaynta badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo socon doona ilaa jimcaha ay taariikhdu tahay 23ka September, wuxuuna ka dhacayaa magaalada the Hague.
Dhagaysiga ayaa khuseeya oo kaliya diidmo ka timid dhinaca Kenya. Soomaaliya dhinaceeda waxay doonaysaa in xudduudda badda dib loo calaamadiyo, ayadoo sheeganaysa in shan qaybood oo badda ka mid ah oo shidaal uu ku jiro inay iyadu leedahay.
Haddaba waxaan khadka taleefanka ee magaalada the Hague kula xiriiray xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Dr. Axmed Cali Daahir, waxaanan marka hore weydiiyey inuu iiga warramo qorshaha xagga dacwadda ee ay Soomaaliya la tagayso maxkamadda.
Maqal Maxaa sabab u ah madaxweynayaal hal waddan ka wada jira?
Maqal Dhibka uu dhallinyarada Soomaalida baday shisheeye nacaybka Koonfur Afrika
Maqal Carruurta Soomaalida Gobolka Minnesota oo uu ku soo badanayo cudurka Autism-ka
Carruurta Soomaalida Gobolka Minnesota oo uu ku soo badanayo cudurka Autism-ka
Maqal Nin toddoba sano Wasiir soo ahaa oo Mu'addin masaajid iisu beddelay
Nin toddoba sano Wasiir soo ahaa oo Mu'addin masaajid iisu beddelay
Maqal Duqeyn lagu beegsaday saraakiil ka tirsan Daacish oo maanta ka dhacday Puntland
Duqeyn lagu beegsaday saraakiil ka tirsan Daacish oo maanta ka dhacday Puntland